रिसाएका अमेरिकी राजदुत र ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता, के -के भयो कुराकानी ? — Imandarmedia.com
रिसाएका अमेरिकी राजदुत र ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता, के -के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको भेटमा अहिले चर्चामा रहेको भेनेजुएला प्रकरणबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
बेरीले प्रधानमन्त्रीसँग भेनेजुएलाबारे अमेरिकी धारणा प्रस्ट्याएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको धारणा स्पष्टसँग राखेका थिए ।
भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा नेकपा र सरकारले अमेरिकी भूमिकाको वक्तव्यमार्फत् आलोचना गरेपछि राजदूत बेरी चिढिएका थिए । भेटमा उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भेनेजुएलाको यथार्थ व्याख्या गर्दै सत्तारुढ दल र सरकारबाट आएका वक्तव्यहरूको विषय पनि उठाएकाे बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो ।
‘भेनेजुएला प्रकरण र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्रीज्यू र राजदूतबीच छलफल भयो, हिजोको भेटबाट नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्धमा आएको चिसोपना मेटिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पञ्चशीलका आधारमा सबै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने र कुनै पनि मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा नहुने भन्दै राजदूत बेरीलाई सम्झाएका थिए ।
माघ १८ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेको ब्रिफिङमा अनुपस्थित भएका राजदूत बेरी मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका हुन् ।
भेनेजुयलाबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्य र त्यसपछि आएको सरकारको धारणासँग असन्तुष्ट रहेका अमेरिकी राजदूत र प्रधानमन्त्रीको भेटबाट नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि अमेरिका नेपालसँग रिसाएको चर्चा चलिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी पनि एउटै मञ्चमा देखिएका थिए । भेनेजुयलामा अमेरिकी हस्क्षेपका विरुद्ध सत्तारुढ नेकपा र सरकारको विज्ञप्तिले अमेरिका रिसाएको चर्चा चलेका बेला उनीहरुलाई सँगै देखिनुलाई कतिपयले आश्चर्यजनक रुपमा हेरिरहेका छन् ।
अमेरिका नेपालसँग रिसाए के–के हुन्सक्छ क्षति ?